တတ်နိုင်ရင် နယ်မပြန်ကြပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေတိုးခိုင် - Cele Gabar
တတ်နိုင်ရင် နယ်မပြန်ကြပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေတိုးခိုင်
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေရဲ့ပိုင်ရှင် မင်းသမီးချောလေးမေတိုးခိုင်ကတော့ ပြည်သူတွေကို တတ်နိုင်ရင် နယ်မပြန်ကြဖို့ကို “ခုချိန်မှာတတ်နိုင်ရင် ဘယ်သူမှ နယ်မပြန်ကြပါနဲ့ ဘယ်လောက်ပြန့်နေပြီလည်းမသိတဲ့ အခြေအနေ မှာ ကိုယ် က တဆင့် ကိုယ့် မိသားစုဆီ ကိုယ့် မြို့ဆီ ဒီ virus ကို သယ်ဆောင်သွားတဲ့ သူ ဖြစ်နိုင်တယ်. အထူးသဖြင့် အလုံပိတ်ကားတွေစီးရမှာကြောင့်ပါ. Positive case တွေ confirmed တဲ့ အချိန် ကူးစက်နေပြီး မစစ်ရသေး မတွေ့ရှိရသေးတဲ့ သူတွေ ဘယ်လောက်များနေပြီလည်း? Please တတ်နိုင်ရင် မပြန်ကြပါနဲ့” လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အဒေါ်ဖြစ်သူ အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တယ်ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေက သတိထား မိလာတဲ့ မေတိုးခိုင်ကတော့ Photo Model တစ်ဦးအဖြစ် တော်တော်လေး နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘယ်လောက်ပြန့်နေပြီလည်းဆိုတာမသိနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ကိုယ် က တဆင့် ကိုယ့် မိသားစုဆီ ကိုယ့် မြို့ဆီ ဒီ virus ကို သယ်ဆောင်သွားတဲ့ သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်ရင် နယ်မပြန်ကြဖို့နဲ့ အထူးသဖြင့် အလုံပိတ်ကားတွေစီးရမှာကြောက်ကြပါတဲ့။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးချောလေး မေတိုးခိုင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘယ်လောက်ပြန့်နေပြီလည်းဆိုတာမသိနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ကိုယ် က တဆင့် ကိုယ့် မိသားစုဆီ ကိုယ့် မြို့ဆီ ဒီ virus ကို သယ်ဆောင်သွားတဲ့ သူ မဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ရင် နယ်မပြန်ကြဖို့ကို တောင်းဆိုထားပါတယ်နော်။
Source: May T. Khine
သေဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ လူနာတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ကြည့်ပြီး သနားနေမလားဆိုတဲ့ ဇဏ်ခီ
Legend of WARRIORS ကားအတွက် အီးထွက်အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ကျော်စု
ရည်းစာနဲ့ပြတ်တာထက် ပိုအသည်းကွဲရတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို မြင်ခဲ့ရတဲ့…